Alarobia 11 Septambra 2019. – FJKM
Alarobia 11 Septambra 2019.
2 Korintiana 5.11-21
Ry mpino ô! manan-draharaha amin’ny fampihavanana ianao . Napetraky ny Tompo amintsika ny Teny fampihavanana (and19) .
1-Ny fitiavan’i Kristy no manery antsika
Tsy mora ny asa fampihavanana . Mety hahazo teny maharary sy fanevatevana , ataony hoe: very saina mihitsy aza… Teren’ny fitiavan’i Kristy isika (and14). Satria ny fitiavan’i Kristy dia ny nahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana ka nandatsahany ny Ran’ny fampihavanana no velona ao anatin’ny mino ka HERY manainga sy manery azy . manana izany ve ianao? Mangataha amin’ny Tompo .
2-Olombaovao izay ao amin’i Kristy
Amin’ny asa soratr’i Paoly dia manan-danja ny filazany hoe : « Ao amin’i Kristy « , tontolo vaovao hahaterahan’ny olona tonga mino ny Zanak’ Andriamanitra izany. Tonga olombaovao izay tafiditra ao. »Koa raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy » (5.17). Andraikitra napetraky ny Tompo amin’ny mino ny mitondra ny olona ho ao amin’i Kristy, mampihavana azy amin’i Kristy ary manova ny fiaraha-monina ho vaovao amin’ny alalan’ny fampihavanana noho i Kristy
Ny ambasadaoro dia iraka , mpisolo tena ny fireneny any an-tany hafa. Ny mino dia mpisolo-tenan’ny fiarahamonin’ny lanitra ety an-tany , manao ny fomba rehetra hahatanteraka ny fampihavanana ho amin’ny famonjena ao amin’i Kristy . Raiso ny andraikitrao! (Mat 28.19).